गर्मीमा छालाको हेरचाह कसरी गर्ने ? | OnlinePatrika.com - News of Nepal, latest and breaking news from Nepal
गर्मी मौसममा बाहिर हिड्दा सुर्यको किरणले छालामा चाउरीपना ल्याउने गर्दछ । खासगरि चाउरीपना उमेरको कारण भन्दा पनि सुर्यको घामबाट बढि हुने गर्दछ । प्राय दश प्रतिशत सुर्यबाट आउने यूविए र यूविवि किरणको कारणले चाउरीपना आउने गर्दछ ।
सुर्यको किरणले बाहिर भागलाई मात्र नभएर भित्री भागलाई समेत असर पार्ने गर्दछ । जसले गर्दा छाला चिलाउने, फुस्रो आउने र चाउरी पर्ने गर्दछ । तर यो कुनै ठूलो समस्या नभई सुर्यबाट हुने असर हो । यसलाई सजिलै समाधान गर्न सकिन्छ ।
पिसेको बदाम एक चम्चा, सुन्तलाको बोक्राको पाउडर एक चम्चा, जौ को पिठो एक चम्चा र पाउडर दुध आधा चम्चा सबै गुलाब जलमा मिसाई घोलेर अनुहारमा लगाउने र सफा पानीले धुने । यदि छाला सुख्खा किसीमको छ भने २० मिनेट सम्म राख्ने र २० मिनेट पछि धुने । यो प्रकृया हप्ताको एक पटक गर्दा पनि छाला नरम हुन्छ । तर छाला तैलिय छ भने यो प्रकृया हप्ताको दुई देखि तीन पटक गर्नुपर्नेछ । यसले छाला चम्किलो बनाउँछ साथै चाउरीपना कम गर्दछ ।
Previous articleनगरपालिकाद्वारा टिपर र ट्याक्टर सञ्चालनमा रोक
Next articleयात्रुवाहक बस दुर्घटना, १ को मृत्यु
‘नक्सा हेर्दा लाग्छ, सरकार स्वाभिमानी छ’
स्वाद बिग्रिए, बुझ्नुस् केही गडबड छ स्वास्थ्यमा !
पर्साका दुई पुरुषमा कोरोना पुष्टि, संक्रमित संख्या ५१
सार्क स्वास्थ्यमन्त्री भिडियो सम्मेलनः कोरोनाविरूद्ध अगाडि बढ्ने सहमति
अमेरिका–क्यानडाबीचको सीमा एक महिना बन्द रहने